Media cup Archives - विवेचना
Tag Archives: Media cup
पुस ४, २०७४-तराईमा चिसो बढेपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ । शुक्रबारदेखि यहाँ शीतलहरको प्रकोप छ । चिसो स्याँठ, बाक्लो कुहिरोले सडकमा चहलपहल घटेको छ । आइतबार १० देखि १३ डिगिबवीच रहेको महोत्तरीको तापक्रम सोमबार विहान ८ डिग्रीमा झरेको छ । यस्तै ३ किमि प्रति घंण्टाको दरले चलको पश्चिमी स्याँठले …
विर्तामोडको कर्फ्यु आज दिउँसो १२ बजेसम्मका लागि हटाइयो
बिर्तामोड । आइतबार राती ९ बजेबाट आज बिहान ९ बजेसम्मकालागि खुल्ला गरिएको बिर्तामोडको कर्फ्यु आज मध्यान्न १२ बजेसम्मकालागि खुल्ला गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको आज बिहान बसेको वैठकले सो कुराको निर्णय गरेको हो । ‘‘सुरक्षा अवस्थाको ख्याल गरेर नै १२ बजेसम्म खुल्ला गरिएको हो ’’, जिल्ला प्रहरी कार्यलय झापाका प्रहरी …
झापामा निर्वाचन कार्यालय स्थापना
भद्रपुर । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि झापा जिल्लामा पाँच वटै निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कार्यालयको उद्घाटन मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवम् जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश खिलानाथ रेग्मीले बिहीबार गरे । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ३ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन …
‘गाउँ-गाउँको प्रतिभा खोज्नुहोस्’
— शंकर थापा, अध्यक्ष : झापा जिल्ला खेलकुद विकास समिति पत्रकारहरुको मेहनतले झापा जिल्ला खेलकुदमय बनेको छ । र, झापाले खेलकुदमा इतिहास रच्न सकेको छ । त्यसैले खेलकुदको विकास र उत्थानका लागि अहोरात्र खटिनुहुने सम्पूर्ण पत्रकारहरुको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । विवेचना दैनिकले आफ्नो २५ औँ वार्षिकोत्सवलाई खेलकुदमय बनाउँदै झापाभरिका …